အီသီယိုးပီးယားလေယာဉ်ပျက်ကျတဲ့ဗီဒီယိုကို အင်ဒိုနီးရှားလေယာဉ်ပျက်ကျတာလို့ပြောထားတဲ့သတင်းမှား | သတင်းအချက်အလက်စိစစ်မှု
AFP မြန်မာ ပုံနှိပ်ဖော်ပြသည့်နေ့စွဲ အင်္ဂါ 12 ဇန်နဝါရီ 2021 အချိန် 08:11
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်ဝါရီ ၉ ရက်တုန်းက အင်ဒိုနီးရှားလေယာဉ် Sriwijaya ပင်လယ်ထဲ ပျက်ကျတဲ့ပုံရိပ်လို့ဆိုထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကို Facebook ပေါ်က ပို့စ်ပေါင်းများစွာမှာ အကြိမ်ရေ ထောင်ချီ ကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအဆိုဟာ မှားယွင်းပါတယ်။ ဒီဗီဒီယိုဟာ အီသီယိုးပီးယားလေကြောင်းလိုင်းက လေယာဉ်တစ်စီး ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှာ ပြန်ပေးဆွဲခံရပြီး အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲပျက်ကျစဉ်က သတင်းတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီဗီဒီယိုကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့တုန်းက ဒီလင့်ခ်မှာ တင်ထားတာဖြစ်ပြီး ကြည့်ရှုတဲ့အကြိမ်ရေ ၄၀၀ ကျော် ရှိခဲ့ပါတယ်။
နားလည်မှုလွဲစေနိုင်တဲ့ပို့စ်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့က ရယူထားတဲ့ screenshot
ရိုက်ထားတာတဲ့. Video ???”
အင်ဒိုနီးရှားဘာသာစကားနဲ့ ဗီဒီယိုမှာပါဝင်တဲ့စာသားတွေကတော့ အခုလိုပါ။ “တံငါသည်တစ်ဦး ဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားမိတဲ့ဗီဒီယိုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ကို အလ္လာရှင် ပိုင်ပါတယ်။ အလ္လာရှင်ဆီကို ကျွန်ုပ်တို့ပြန်ကြတာပါ။ လေယာဉ်ပျက်ကျမှုတစ်ခု”
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်နေ့တုန်းက Sriwijaya ဘိုးရင်း ၇၃၇-၅၀၀ လေယာဉ် ဂျာကာတာလေဆိပ်ကနေ ပျံတက်ပြီးမကြာခင်မှာ ပျက်ကျလို့ လေယာဉ်ပေါ်ပါ လူ ၆၂ ဦး သေဆုံးခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်အကြောင်း AFP သတင်းကို ဒီလင့်ခ်မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
သတင်းပါစာသားအချို့က အခုလိုဖြစ်ပါတယ်။ “Sriwijaya ဘိုးရင်း ၇၃၇-၅၀၀ သည် စနေနေ့ နေ့လယ်က Soekarno-Hatta အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ ပျံတက်ပြီးနောက် လေးမိနစ်အကြာတွင် ပင်လယ်ထဲသို့ ဦးစိုက်ထိုးဆင်းသွားခဲ့သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် လေယာဉ်ပျက်ကျရသည့်အကြောင်းအရင်းကို မသိရသေးပေ။ တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် အရေးအပေါ်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးကို အဓိကထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော်လည်း အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ မရှိနိုင်တော့ကြောင်းနှင့် မျှော်လင့်ချက်နည်းပါးနေပြီဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်”
အလားတူဗီဒီယိုကို တူညီတဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ Facebook ရဲ့ ဒီလင့်ခ်၊ ဒီလင့်ခ်၊ ဒီလင့်ခ်၊ ဒီလင့်ခ်၊ ဒီလင့်ခ်၊ ဒီလင့်ခ်နဲ့ ဒီလင့်ခ်တွေမှာ တင်ထားပါသေးတယ်။
ဗီဒီယိုကနေ အဓိကကျတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုထုတ်နုတ်ပြီး google မှာ ဓာတ်ပုံရာဇဝင်ရှာကြည့်တဲ့အခါ Naked Sciene အမည်ရှိတဲ့ YouTube ချန်နယ်တစ်ခုရဲ့ ဒီလင့်ခ်မှာ အဲဒီဗီဒီယိုကိုတင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဗီဒီယိုအကြောင်း သတင်းမှာဖော်ပြထားတာကတော့ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တုန်းက အီသီယိုးပီးယားလေကြောင်းလိုင်းလေယာဉ် ၉၆၁ ပြန်ပေးဆွဲခံရတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ဘိုးရင်း 767-200ER ဟာ ပျံတက်ပြီးမကြာခင်မှာ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲ ပျက်ကျခဲ့တာဖြစ်ပြီး လူပေါင်း ၁၂၅ ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ လေကြောင်းဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဝဘ်ဆိုက်ရဲ့ ဒီလင့်ခ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဗီဒီယိုရဲ့ခေါင်းစဉ်ပါစာသားတွေက အခုလိုဖြစ်ပါတယ်။ “လေယာဉ်ပြန်ပေးဆွဲခံရမှု - ရေထဲတွင်ပျက်ကျ”
ဗီဒီယိုမှာ သတင်းကြေညာသူက အခုလိုပြောပါတယ်။ “ဘိုးရင်း 767-200ER ဟာ ၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့မှာ အက်ဒစ်အဘာဘာမြို့ကနေ နိုင်ရိုဘီမြို့ကို ပျံသန်းသွားစဉ်မှာ ပြန်ပေးဆွဲခံခဲ့ရပါတယ်။ လေယာဉ်ပျံသန်းနေတဲ့ခရီးစဉ်က ဘုံဘေ-အက်ဒစ်အဘာဘာ-နိုင်ရိုဘီ-ဘရက်ဇာဗီးလ်-လာဂို့စ်-အဘစ်ဂျန်ဖြစ်ပြီး သြစတြေးလျမှာ ခိုလှုံခွင့်တောင်းဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံသားသုံးဦးက ပြန်ပေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လေယာဉ်ဟာ ဆီကုန်သွားတဲ့အတွက် Comoros ကျွန်းစုထဲက Grande Comore ကျွန်းအနီး
အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာ အရေးပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့ရပြီး လေယာဉ်ပေါ်ပါ ခရီးသည်နဲ့ လေယာဉ်အမှုထမ်း ၁၇၅ ဦးအနက် ပြန်ပေးဆွဲသူတွေအပါအဝင် လူ ၁၂၅ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်”
နားလည်မှုလွဲစေတဲ့ပို့စ်တွေပါဗီဒီယိုဟာ မူရင်းဗီဒီယိုကို ပြောင်းပြန်ပြန်လှည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အောက်မှာ နားလည်မှုလွဲစေတဲ့ပို့စ်တွေပါဗီဒီယို (ဘယ်) နဲ့ Naked Science ပါဗီဒီယို (ညာ) တို့ကို နှိုင်းယှဉ်ပြထားတဲ့ screenshot တွေဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလေယာဉ်ပျက်ကျမှုအကြောင်းသတင်းကို ၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့မှာ CNN ကလည်း တင်ထားပါသေးတယ်။
သတင်းပါစာသားတချို့က အခုလိုဖြစ်ပါတယ်။ “အင်္ဂါနေ့မှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ ဗီဒီယိုတိပ်မှာတော့ စနေနေ့တုန်းက ပြန်ပေးဆွဲခံရပြီး အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲပျက်ကျသွားခဲ့တဲ့ အီသီယိုးပီးယားလေကြောင်းလိုင်းလေယာဉ်အမှတ် ၉၆၁ ကို တွေ့ရပါတယ်။ လက်ရှိထိန်းသိမ်းထားသူ နှစ်ဦးဟာ လေယာဉ်ပြန်ပေးဆွဲတဲ့အထဲမှာပါလားဆိုပြီး တာဝန်ရှိသူတွေ စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြပါတယ်”
Comoros ကျွန်းမှာ ဟန်းနီးမွန်းထွက်လာတဲ့ တောင်အာဖရိကဇနီးမောင်နှံဟာ သူတို့တည်းနေတဲ့ဟိုတယ်ရှေ့ ကမ်းခြေမှာ နေပူဆာလှုံနေတုန်း လေယာဉ်ပျက်ကျတာကို မြင်လိုက်ရတဲ့အတွက် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာလို့လည်း သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။